हाइड्रोलिक टाईल्स - लाभ, सफाई र सबै कुरा तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ सजाउनुहोस्
हाइड्रोलिक टाईलहरू: लाभ, सफाई र सबै कुरा तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ
सुसाना Godoy | 06/07/2021 09:44 | सजाउनुहोस्
हाइड्रोलिक टाईल्स कुनै सजावटी विचार होईन जुन कहिँ पनि देखा पर्दैन, विपरीत हो भने। यो हामीसँग लामो समयदेखि आएको छ र यसको उपस्थिति फ्रान्सको दक्षिणमा १ th औं शताब्दीमा मिल्छ। तर यो अवधारणा द्रुत युरोपभरि फैलियो र यो कुनै अचम्मको कुरा थिएन।
यद्यपि यो सबै पहिले नै केहि पछाडि छ, यो सत्य हो कि त्यहाँ विचारहरु छन् जुन कहिले पनि शैलीको चलनबाट टाढा हुँदैन। हाइड्रोलिक टाईलहरूको साथ तपाईंको घरको ड्रेसिंग शैली, मौलिकता र धेरै राम्रो स्वादको बारेमा कुरा गर्दैछ। त्यसोभए यदि तपाईं तिनीहरू वास्तवमै के हो जान्न चाहानुहुन्छ भने, डिजाइनहरू तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुनेछ र अनगिन्ती फाइदाहरू पनि, तपाईंलाई निम्न कुरा जान्नु आवश्यक छ जुन पछि हुन्छ। के हामी सुरु गर्छौं?
1 हाइड्रोलिक टाईलहरू के हुन्?
2 हाइड्रोलिक टाईल्समा शर्त लगाउने मुख्य फाइदाहरू के हुन्
2.1 स्पेस डिभाइडर्स
2.2 लामो अवधि
2.3 तिनीहरू धेरै बहुमुखी छन्
2.4 स्थापना गर्न सजिलो
2.5 तिनीहरूसँग अनन्त डिजाइनहरू छन्
3 हाइड्रोलिक टाईलहरू कसरी सफा गर्ने
हाइड्रोलिक टाईलहरू के हुन्?
यो एक प्रकारको मोजेक हो जुन टाइलमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र दुबै सिमेन्ट र रंगद्रव्य र संगमरमरको धुलोको एक भागले बनेको हुन्छ।, यसको ठूलो बहुमतमा। तर के कुराले उनीहरूलाई त्यो चरित्रको नाम दिन्छ कि तिनीहरू तथाकथित हाइड्रोलिक प्रेसमा बनेका छन् ओभनमा होइन तर त्यस्तै विचारहरूमा हुन्छन्, जसलाई उनीहरूको प्रक्रिया पूरा गर्न पकाउन आवश्यक पर्दछ। यो पहिले नै एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु थियो जब यो बेटिस गर्न आयो, तर यो यो हो कि तिनीहरू पनि कम उत्पादन लागत र लगभग असीमित डिजाइन भएको थियो। त्यसोभए त्यहाँ तिनीहरूले आफ्नो पहिलो फाइदा पहिले नै सुरु गरे।
हाइड्रोलिक टाईल्समा शर्त लगाउने मुख्य फाइदाहरू के हुन्
यद्यपि तपाइँ यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न, हो कोठा डिभाइडर्सको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ। यसको कारण यो हो कि टाईलहरूसँग पूर्ण रूपले फरक पूर्ण मोजाइकहरू हुन सक्छन्, दुबै रंग र बान्कीमा। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ तपाइँको घर मा एक क्षेत्र को परिभाषित गर्न को लागी तपाइँ यसलाई प्रख्यात बनाउन वा दुई बिल्कुल बिभिन्न कोठाहरु अलग गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, विभाजन सिर्जना नगरी वा फर्निचरको नयाँ टुक्रा राख्नु पर्छ।
केवल केही साधारण हेरचाहको साथ, हामी यो भन्न सक्छौं यसको प्रतिरोध त्यस्तो छ कि हामीसँग लामो समयको लागि टाइलहरू हुनेछन्। यसले दिमागमा राख्नको लागि यसलाई विचारहरू मध्ये एक पनि बनाउँछ। जब हामी यस प्रकारको लगानी गर्छौं, हामी यसलाई लामो समयसम्ममा राख्न चाहन्छौं।
तिनीहरू धेरै बहुमुखी छन्
हामी हाइड्रोलिक टाईलहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन हामी केवल बाथरूममा देख्दैनौं, उदाहरणका लागि। तिनीहरूसँग दुवै घर र घर भित्र सबै कोठामा अनुकूल गर्न सक्षम हुनुको त्यो बहुमुखी प्रतिभा हो र यसको भव्यता र भेदभावको एक iota नगुमाईकन। किनकी भित्ताहरू वा तपाईंको बेडरूमको हेडबोर्ड पनि यस जस्तो विचारलाई स्वागत गर्न खुसी हुनेछन्।
जब हामी चाहन्छौं यो अर्को चिन्ताको विषय हुन सक्छ हाम्रो घरको भुईं नवीकरण गर्नुहोस्। तर पक्कै पनि, यस प्रकारको टाइलको साथ कुनै समस्या हुनेछैन। अवश्य पनि, आफैंलाई विशेषज्ञबाट निर्देशित हुन दिनुहोस् तर यसको साथै हामी तपाईंलाई यो पनि भन्नेछौं कि तिनीहरू स्थापना गर्न सजिलो छ र तपाईं यसलाई तातो फ्लोरको माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूसँग अनन्त डिजाइनहरू छन्
अब तपाईं तिनीहरूको डिजाइनहरू मध्ये एउटा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने त्यहाँ थोरै छैन। हुनसक्छ यो त्यस्तो चरण हो जुन तपाईलाई सबै भन्दा लामो लाग्छ, तर सबैभन्दा रमाईलो। रंगबाट ढाँचाहरूमा तिनीहरूले मुख्य भूमिका खेल्छन्। तपाईं जहिले पनि तपाईंको स्वादहरू द्वारा टाढा पाउन सक्नुहुन्छ विशालता र कोठाको चमक वा उनीहरूमा रहेको फर्नीचर द्वारा।
हाइड्रोलिक टाईलहरू कसरी सफा गर्ने
घरेलु उपचारहरू सधैं हामीलाई चाहिने धक्का दिन चाहन्छन्। त्यसकारण, जब हामी आफैलाई सोध्छौं हामी हाइड्रोलिक टाईलहरू कसरी सफा गर्न सक्छौं, हामीसँग धेरै छन् जुन तपाईंको दिनलाई बनाउँदछन्।
पानी र एप्पल साइडर सिरका: हो, यो एक धेरै सामान्य विचार हो र यसको लागि तपाईंले यसलाई न्यानो पार्नु पर्छ र थोरै सिरका। यस मिश्रणलाई टाईल्समा दिनुहोस् र तपाईं देख्नुहुनेछ कि ती कसरी चम्किला छन्।
बेकिंग सोडा सधैं नजिक हुनुपर्दछ। योसँग बहुविध प्रयोगहरू छन्, यो सत्य हो, तर यस केसमा यसले सबैभन्दा बढि ईन्क्रेस्टेड दागहरूमा आक्रमण गर्दछ। त्यसोभए तपाईंले यस घटक र तातो पानीको साथ टाँस्नु पर्छ। तपाईंले यसलाई फोहोरमा राख्नुभयो, केही मिनेट कुर्नुहोस् र राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्
तपाईं रासायनिक उत्पादनहरूसँग सावधान हुनुपर्छ जसले यसले क्षति पुर्‍याउँदछ, साथसाथै ब्लीच वा अमोनिया, जुन यस प्रकारको टाइलको लागि सबै भन्दा राम्रो हुँदैन। बाँकि, केहि पनि दिनदिनै एक भित्ते पार गर्ने जस्तो छैन ताकि मैला नबस्न र यदि हामीले त्यो उज्यालो देख्यौं भने साबुन र पानी जस्तो केही छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » सजाउनुहोस् » हाइड्रोलिक टाईलहरू: लाभ, सफाई र सबै कुरा तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ
आन्तरिक प्रकाशको प्रकार
कृत्रिम मैदान हेरचाह